မှိုမှိုဖြေရှင်းချက် - မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အင်ဂျင်နီယာ - သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပါ။
မှိုပုံသဏ္industryာန်ထုပ်ပိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်များတွင်အိတ်များ၊ ဗန်းများ၊ ထုပ်ပိုးများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ အိတ်ကပ်များ၊ ကျုံ့နေသောဥမင်များ၊ ဗန်းသိုလှောင်ရုံများ၊
ပုလင်းသယ်ဆောင်စက်များ (ပြားချပ်ချပ်ခါးပတ်၊ ကွင်းဆက်၊ ဘေးချင်းကိုင်တွယ်ခြင်း)၊ pallet ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ဓာတ်လှေကားများ၊
2022 တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Roadshow များကို သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Roadshows များအတွက် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ရယူလိုပါသလား သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်း & ဝန်ဆောင်မှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Delta Engineering တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၂၅ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည် blow မှိုများအတွက်ဖြေရှင်းချက်.
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ပြီးကတည်းကကျနော်တို့ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်. ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါ။ ဖြေရှင်းချက်၏ပြည့်စုံသောအကွာအဝေး ကဏ္ sector အတွေ့အကြုံရှိကုမ္ပဏီများကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများဖြစ်သည်။
သရုပ်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တွင်လိုင်းထိုးစက်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဗန်းထုပ်ပိုးသူများ၊ ယိုစိမ့်သောစမ်းသပ်သူများသို့မဟုတ်အလေးချိန်စစ်ဆေးသူများ၊ အိတ်များ၊ ကျုံ့သောဥမင်များ၊ အိတ်ဖောက်စက်များ၊ tumble pack ဖြေရှင်းချက်များ၊ အအေးနှင့်ကြားခံစားပွဲများ၊ စားပွဲချချများ၊ ပုလင်းရွေးစက်များ၊
ဒီချဉ်းကပ်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Delta Engineering ဖြစ်လာသည် အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်များ၏ ဦး ဆောင်ပေးသွင်းတစ် ဦး အဆိုပါထိုးနှက်သွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများ၊ သူတို့၏သစ္စာရှိမှုနှင့်စုဆောင်းခြင်းတို့ဖြင့်လည်းရှင်းပြနိုင်သည် အတှေ့အကွုံ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြီးအကျယ်အကြိုးပေးသော။
နောက်အချက်တစ်ချက်မှာ သစ်လွင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှချမှတ်ထားသောမြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများကိုအောက်ခြေစက်မှုလုပ်ငန်းမှထိုးဖောက်ခြင်းမှတီထွင်ဆန်းသစ်သောခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုတိုးတက်အောင်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဝန်ဆောင်မှု နောက်ထပ်: ငါတို့အဘို့အကွိုးစား အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တပ်ဆင် နှင့် - အရောင်းမြှင့်တင်ရေးထောက်ခံမှု.